Zeblaze THOR 4 Plus, finday avo lenta misy famantaranandro ho an'ny 100 euro mahery kely fotsiny | Androidsis
Amin'izao fotoana izao, ary miankina amin'ny fampiasantsika ny smartphone, ny asa na ny fiainantsika manokana, dia azo inoana fa mila mifandray foana isika. Tsy azo atao foana izany, na satria tsy manana toerana hitondrana azy isika (raha mivoaka hanao fanatanjahan-tena) na satria voarara amin'ny toerana misy antsika izany.
Ny vahaolana amin'ireo olana ireo dia hita ao amin'ny smartwatches miaraka amin'ny fifandraisana LTE izay ahafahantsika manao antso an-tariby ihany koa, ary izay mamela antsika hifandray amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra ankafizinay indrindra. Androany isika dia miresaka momba ny smarwatch Zeblaze THOR 4 Plus.
Ny Zeblaze THOR 4 Plus dia smartwatch ihany koa mampiditra puce 4G / LTE izay ahafahantsika manampy karatra SIM nano, noho izany dia hifandray amin'ny fifandraisana foana isika fa tsy miankina amin'ny smartphone izay ampifandraisin'ireto karazana fitaovana ireto matetika.
Ao anatin'ity fitaovana ity no ahitantsika Android 7.1.1 izay mamela antsika hametraka hafatra, mailaka na rindranasa hafa izay mila fifandraisana Internet hiasa. Ny Zeblaze THOR 4 dia tantanan'ny mpanodina MTK4 6739-core, novokarin'i MediaTek ary niaraka tamin'ny RAM 1 GB sy fitehirizana anatiny 16 GB.
Ny efijery, iray amin'ireo faritra manandanja indrindra amin'ity karazana fitaovana ity dia 1,4 santimetatra ary manolotra anay vahaolana 400 × 400 teboka. Ho fanampin'izay, ary raha tsy ampy izany, dia manolotra fakan-tsary 5 mpx ho antsika koa izy, ahafahantsika miantso haingana ny horonan-tsary avy eo amin'ny hatotanay.
Izy io koa dia misy fifandraisana Wi-Fi tarika roa, GPS, Bluetooth 4.0, ary bateria 580 mAh. Ny Zeblaze THOR 4 dia manana savaivony 4,85 cm, ny hatevin'ny 1,59 cm ary ny lanjany manontolo, ampio ny an'ny tadiny (vita amin'ny silicone), 66 grama.
Raha liana amin'ny fahazoana an'ity smartwatch ity ianao dia afaka ajanony ity rohy Tomtop ity y vidio amin'ny vidiny 105,47 euro fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Zeblaze THOR 4 Plus, finday avo lenta misy famataranandro 100 euro fotsiny
Mamitaka hamidy ny findainao Android amin'ny Wallapop
Ny lalao Nintendo tsara indrindra ho an'ny Android